काठमाडौंको मतगणना शुरु
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौँ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौँ जिल्लाका केही निर्वाचन क्षेत्रका मतगणना शुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
सभागृहमा गगन र राजनको जनमतको बाकस खोलियो
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नं ४ को मत गणना सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
डोल्पा प्रदेशसभा 'क' मा एमालेका बुढा विजयी
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, दुनै, डोल्पा । बिहीबार राति ९:३० बजेबाट शुरु भएको प्रदेशसभा क्षेत्र नं १ (क) को मतगणना सम्पन्न भएको छ । ... बाँकी अंश»
धनुषा ३ को मतगणना शुरू
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, जनकपुरधाम । धनुषा जिल्ला क्षेत्र नं ३ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्यको मतगणना शुरू भएको छ । ... बाँकी अंश»
दाङमा मतगणना शुरु
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, दाङ । दोस्रो चरणअन्तर्गत हिजो भएको निर्वाचनपछि आज बिहानदेखि दाङमा मतगणना शुरु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१५ भरतपुरस्थित पद्मोदय पब्लिक नमूना माविमा मतगणना शुरु गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
झापाका दलहरुको निर्णय साढे १२ बजेदेखि मतगणना सुरु
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । झापामा भर्खरै सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार दिउँसो १२ ... बाँकी अंश»
मुलुक मतगणनामयः निर्वाचन आयोगले के दियो पछिल्लो जानकारी ?
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौँं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना तथा मतपेटिका संकलनको विवरण आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिएको छ । ... बाँकी अंश»
रुकुम पूर्वका प्रदेश सभामा माओवादीले गर्‍यो क्लिन स्विप
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, रुकुम । रुकुम पूर्वका दुवै प्रदेश सभा सदस्यमा बाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । ओखलढुंगाको ताजा मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार यज्ञराज सुनुवार एक हजार मतले अगाडि देखिएका छन् । ... बाँकी अंश»
कञ्चनपुरमा मतगणना सुरू हुँदै, सर्वदलीय बैठक सम्पन्न
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, कञ्चनपुर । दोस्रो चरण अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन को मतगणना सुरू हुँदैछ । ... बाँकी अंश»
पाँचथरमा पनि काँग्रेसलाई छाडेर एमाले अगाडि, बदर मत बढी
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, पाँचथर । पाँचथरमा नेपाली काँग्रेसलाई छाडेर एमाले अगाडि लागेको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ १५,६०५ मत गन्दा एमालेका उम्मेदवार बसन्तकुमार नेम्वाङ ७४५१ मत सहित अगाडि छन् । ... बाँकी अंश»
पाँचथरमा वसन्त अगाडि, भिष्मराज २ हजार मतले पछाडि
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तर्फ पाँचथरमा पनि नेकपा एमालेले अग्रता हाँसिल गरेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा ... बाँकी अंश»
बाजुरामा काँग्रेस अगाडि
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, बाजुरा । बाजुरामा नेपाली काँग्रेस अगाडि रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कविराज पण्डितले अग्रतालाई कायमै राखेका छन् । ... बाँकी अंश»
दार्चुलामा २७ हजार मत गन्दा ४ हजारले एमाले अगाडि
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । दार्चुलाको पछिल्लो चुनावी मत अपडेट सार्वजनिक भएको छ । जस अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभा तर्फ एमालेका उम्मेदवारको अग्रता देखिएको छ । ... बाँकी अंश»
योगेश भट्टराई विजय उन्मुख
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, ताप्लेजुङ। नेकपा एमालेका सचिव एवं ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार योगेश भट्टरार्इले फराकिलो मतान्तरले अग्रता लिएका छन्। मतपरिणाम अनुसार उनी विजय उन्मुख छन्। ... बाँकी अंश»
बैतडीमा एमाले अघिअघि, काँग्रेस पछिपछि, कति मत ?
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, बैतडी । यहाँ मंसिर १० गते सम्पन्न पहिलो चरणको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको बैतडीमा मतगणना जारी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
बाजुरामा काँग्रेस अगाडि एमाले पछिपछि
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, बाजुरा । बाजुराको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । ... बाँकी अंश»
रसुवामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि, कसको कति मत ?
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, रसुवा । प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवा जिल्लामा मतगणना जारी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
भक्तपुरको बिना तारबार नै मतगणना, कति ढुक्क ?
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, भक्तपुर । भक्तपुरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना बिना तारबार खुल्ला रुपमा हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
काठमाडौंको मतगणना १० बजेपछि, कहाँ कहाँ हुँदै गणना ?
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लाको प्रतिनिधि सभातर्फको मतगणना शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»